Dad u dhashay dalka Britain oo shil ku dhintay iyaga oo cumraysanaya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDad u dhashay dalka Britain oo shil ku dhintay iyaga oo cumraysanaya
Hiiraan Xog, Apr 23, 2018:- Afar ruux oo Britain u dhalatay ayaa dhimatay 12 ruux oo kalana dhaawacyo ayaa soo gaaray ka dib markii uu shil galay bas ay saarnaayeen iyaga oo cumro u jooga Sacuudiga, sida ay sheegtay shirkad dhanka socdaalka ka shaqaysa.
Raj Begum Xuseen oo 70 jir ah ayaa ka mid ahayd dadka dhintay, waxaa kale oo la sheegay in ay dhinteen nin kale oo duq ah iyo hooyo iyo wiil ay dhashay.
Bas ay saarnaayeen dadkan ku soo cumraysanayay masaajidka Nabiga N.N.K.H ee magaalada Madina ayaa waxaa ku dhacay gaari shidaal waday, dab halkaas ka dhashay ayaana baskii qabsaday, sida ay shirkaddaasi socdaalku sheegtay.
Shirkadda socdaalka ee Hashim Travel oo safarkan isku dubaridday ayaa sheegay in “shilka Sabtidii dhacay uu ahaa mid aad u xannuun badan”.
Siddeed iyo toban ruux ayaa baska saarnayd marka uu shilku dhacay, dhammaantood isbitaal ayaa loola cararay, halkaas oo wali lagu dabiibayo lix ka mid ah dhaawicii.
Waxaa la fahamsan yahay in dadka dhaawaca ah uu ka mid ah yahay ilmo yar.
Dadkan ayaa hal toddobaad ku sugnaa Sacuudiga iyaga oo u joogay in ay gutaan acmaasha Cumrada.
Dalka Faransiiska oo meelmariyay shuruuc adag oo dhanka soogalootiga ah